Manni barnootaa Aldiyaa al-Islaamiyaa har'a tajaajila kennuu jalqabe - BBC News Afaan Oromoo
Manni barnootaa Aldiyaa al-Islaamiyaa har'a tajaajila kennuu jalqabe
Madda suuraa, GG
Man Barnootaa Aldiyaa al-Islaamiyaa
Kibxata darbe ALI Onkololeessa 20 bara 2010 magaalaa Asmaraa keessa mormiin ka'uun, dargaggoonni hedduun hidhaaf saaxilamaniiru.
Dargaggoonni kunniin kan hidhaman buufataalee poolisii 1ffaa hanga 5ffaatti argamanitti ta'uu odeeffannoon naannicharraa arganne ni ibsa. Kana malees, ijoolleen umriin isaanii xiqqaa ta'an hidhaa gadhiifamuu isaanillee nutti himan.
Naannoo Akriyaa jedhamuttis humnoonni waraanaa turan gadhiisanii bahuun isaanis beekameera. Mormii kanaaf sababa kan ta'e Manni Barnootaa Aldiyaa al-Islaamiyaas hojiitti deebi'uusaa fi barattoonnis barnoota idilee isaanitti deebi'uun isaanii barameera.
Akka maddeen keenyaatti, maatiin ijoolleen isaanii jalaa hidhaman gara buufata poolisiitti, nyaataa fi uffata fuudhanii ennaa deemanis argamaniiru.
Embaasii Xaaliyaan Asmaraa argamutti kan hojjetan Abba Diyeegoo Soolinaas, mormii kanarra namni miidhame akka hin jirre BBCtti himaniiru.
Hajii Muusaa Mohaammad Nur
Ministirri Beeksisaa Ertiraa Abba Yemaanee G/Masqal gama isaaniitiin, mormii kanaan namni tokkollee akka hin duune twiit godhaniiru.
Kana malees, jijjiirraa abbummaa mana barnootaa kanaa mormuun wayita walgahii taasisaa turanitti, maatiin barattootaa hidhaman. Hajii Muusaa Mohaammad dabalatee namoonni biroon haalli irra jiran akka hin beekamne maddeen keenya dabalanii ibsaniiru.
Gaazexessitoonnii fi qondaaltoonni Ertiraa baayyeen murtii tokko malee mana hiidhaa keessatti akka argaman dubbatama. Har'aafis seenaa gaazexeessaa tokkoo maatiin isaa akkasiin nuuf qoodaniiru
'Yaalii akkan lubbuukoo dhabuuf taasifamaa jirudha' - Obbo Lidatuu Ayyaalew
Firaans mormii Paakistaanii irratti ka'e hordofee lammileenshee akka achii bahan ajajje